digiKam 7.2.0 dia miaraka amin'ny fanatsarana ny maotera hita maso, interface sy maro hafa | Ubunlog
digiKam 7.2.0 dia miaraka amin'ny fanatsarana ny maotera hita maso, ny interface sy ny maro hafa
Taorian'ny fampandrosoana iray taona ny famoahana ny kinova vaovao dia nambara ny programa amin'ny fitantanana ny fanangonana sary digiKam 7.2.0 ary ity kinova vaovao ity dia tonga hamaha ny 360 lesoka ary misy fanatsarana marobe, izay miavaka ny motera hita maso, ary koa ny rakikira, ny fitaovan'ny karoka fanavaozana ary maro hafa.
Ho an'ireo izay tsy mahalala ny digiKam dia tokony hahalala izany mpikarakara sary maimaimpoana ary mpanonta-tag ary loharano misokatra voasoratra ao amin'ny C ++ mampiasa rindranasa KDE.
Mihazakazaka amin'ny tontolon'ny birao sy mpitantana varavarankely malaza indrindra izy io, raha apetraka ireo tranomboky ilaina.
Manohana ny endrika fisie rakitra lehibe rehetra, toy ny JPEG sy PNG, ary koa maherin'ny 200 endrika sary manta, ary afaka mandamina fanangonana sary ao anaty rakipeo miorina amin'ny lahatahiry na rakikira mavitrika amin'ny daty, timeline na tag ianao.
1 DigiKam 7.2.0 Fampisehoana vaovao lehibe
2 Ahoana ny fametrahana digiKam 7.2.0 amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
DigiKam 7.2.0 Fampisehoana vaovao lehibe
Ao amin'ity kinova vaovao ity motera fahitana tarehy sy fitaovana fanesorana maso mena mampiasa maodely fianarana milina vaovao (Yolo) hamaritana tsara kokoa ny tarehy amin'ny sary misy zoro sarotra.
Nampitomboina ihany koa ny hafainganana fanodinana data ary nampiharina ny fahafaha-manao asa fampitoviana, nesorina tamin'ny fisie fizarana fototra niaraka tamin'ny angona avy tamin'ny maodely fianarana ny milina, izay efa ampidirina amin'ny fotoana maharitra sy ny interface graphique dia nohavaozina mba hiasa amin'ny tarehy ary mampifandraisa ireo marika amin'izy ireo, ary koa ireo widget mifandraika amin'izany.
Ny fiovana iray hafa miavaka dia izany nohatsaraina ny fizotran'ny fitantanana rakikiranivelatra ny fahafaha-manao fampitam-baovao, nohafainganina ny motera fanivanana famoahana sarontava, nohamafisina ny fampisehoana fananana ary nohatsaraina ny fanohanan'ny haino aman-jery azo esorina.
Ny motera anatiny handrindrana ny sary RAW dia nohavaozina mankany amin'ny version libraw 0.21.0. Fanampiana fanampiny ho an'ny CR3, RAF, ary ny endrika DNG, miampy fanampiana fanampiny ho an'ny maodely fakantsary vaovao, ao anatin'izany ny iPhone 12 Max / Max Pro, Canon EOS R5, EOS R6, EOS 850D, EOS-1D X Mark III, FujiFilm X -S10, Nikon Z 5, Z 6 II, Z 7 II, Olympus E -M10 Mark IV, Sony ILCE-7C (A7C) ary ILCE-7SM3 (A7S III).
Of the fanovana hafa izay miavaka:
Fitaovana nohatsaraina tamin'ny fampidirana sary avy amin'ny fakantsary, nanampy fanohanana ny fanomezana anarana mandeha ho azy ny rakikira sy ny fanovana anarana mandritra ny upload.
Nisy fitaovana nampiana hanamarinana ny fanavaozana ny fivorian'ny binary izay manana fahaizana misintona sy mametraka azy ireo ho azy.
Ny fananganana ho an'ny macOS dia nihatsara.
Ny kaody dia namboarina mba hiasa miaraka amin'ny tahiry ary ireo drafitra fitahirizana ampiasaina amin'ny fikarohana, fitahirizana metadata, fanekena endrika ary fiasan'ny fitaovana isan-karazany. Hafainganam-pandeha scanner fanangonana mandritra ny fanombohana.
Fanatsarana fanatsarana ny fampidirana amin'ny motera fikarohana semantika sy amin'ny MySQL / MariaDB.
Ireo fitaovana ho an'ny fikojakojana data dia nitarina.
Nisy ny ezaka natao hanatsarana ny fitoniana sy ny fampiasana ny fitaovana hanovana anarana ny vondron-drakitra amin'ny maody batch.
Ny fahafaha-mitahiry ny mombamomba ny toerana amin'ny metadata dia nampiana ary nihatsara ny fanohanana ireo rakitra GPX.
Farany, raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao momba ny kinova vaovao navoaka dia azonao atao ny manamarina ny pitsopitsony Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fametrahana digiKam 7.2.0 amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ho an'ireo liana afaka mametraka ity kinova vaovao digiKam 7.2.0 amin'ny rafitrao ity Ho vitany amin'ny fomba tsotra izany.
Noho izany dia hampidina ny mpampiditra azy fotsiny isika mampiasa ny sasany amin'ireo baiko zarainay aminao eto ambany Ny hataonay dia ny manokatra faran'ny terminal sy karazana:
Manome alalana famonoana amin'ny:
Ary azon'izy ireo atao ny mampandeha ny installer amin'ny alàlan'ny fikitihana indroa na avy amin'ny terminal miaraka amin'ny:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » sary » digiKam 7.2.0 dia miaraka amin'ny fanatsarana ny maotera hita maso, ny interface sy ny maro hafa
Rakudo, ny fomba fametrahana an'ity Raku compiler ity amin'ny Ubuntu 20.04
Ruby, fomba samihafa hametrahana azy ao amin'ny Ubuntu 20.04